ट्रमा सेन्टरको बेहाल: बिग्रिएका उपकरण बनाउन प्रशासन उदासीन | नेपाली जनता :: Nepali Janta:
ट्रमा सेन्टरको बेहाल: बिग्रिएका उपकरण बनाउन प्रशासन उदासीन
प्रकाशित मिति ३१ जेष्ठ २०७६, शुक्रबार २०:०० लेखक नेपाली जनता
काठमाडौं । राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरमा भएका अधिकांश मेसिन बिग्रिएर बेहाल अवस्थामा पुगेको छ । विपन्न जनताले सर्वसुलभ रकममै स्वास्थ्य सेवा पाउन् भनेर खोलिएको सरकारी अस्पताल ट्रमा सेन्टरमा बिग्रिएका उपकरण महिनौँ दिनसम्म बन्न सकेका छैनन् । अझै कति समय लाग्ने हो एकिन छैन ।
सेन्टरमा भएको सिटि स्क्यान मेसिन ८ महिना अगाडिदेखि बिग्रिएर थन्किएको छ । त्यस्तै अन्य स्वास्थ्य उपचारका उपकरणहरू पनि बिग्रिएर थन्किएको महिनौँ भईसक्यो । अप्रेसनपछि स्टील राख्न हड्डीमा प्वाल पार्ने ‘ड्रिल’ मेसिन, भेन्टिलेटर, जेनेरेटर, अटो क्लेभ मेसिन, एसी लगायत उपकरणहरू बिग्रिएर थन्किएका छन् । अत्यावश्यक उपकरणहरू बिग्रिदा विरामीहरूले अस्पतालबाट पाउने सेवा प्रभावित भईरहेको छ । लामो समयदेखि उपकरण बिग्रिँदा पनि अस्पताल प्रशासनले भने मेसिन बनाउन चासोका साथ लागेको देखिदैन ।
यता, उक्त सेवा पाउनुपर्ने बिरामी भने अहिले निजी अस्पतालमा महंगो रकम तिरेर उपचार गराउन बाध्य भएका छन् । ट्रमा सेन्टरले त्यहा आएका बिरामीलाई नजिकै रहेको वीर अस्पतालमा रिफर गर्ने दाबी गरेपनि अधिकांश निजीमै जाने गरेका छन् । विर अस्पतालमा ति सेवा लिन त्यही आएका बिरामीकै लामो लाइन हुने भएकाले बाध्य भएर बाहिर जानुपर्ने अवस्था रहेको छ । सांसदहरूले प्रतिनिधिसभा बैठकमा सरकारी अस्पताल निजी अस्पतालमा बिरामी रिफर गर्ने एजेन्सी जस्तो भनेर आवाज उठाईरहेका वेला ट्रमा सेन्टरमा यो अवस्था फेला परेको हो ।
यता, अस्पताल प्रशासनले भने सरकारी कामकारवाहीमा हुने ढिलासुस्तीकै कारण बिग्रिएका उपकरण बनाउन नसकिएको जवाफ दिएको छ । अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक डा. प्रमोद यादवका अनुसार यस विषयमा मन्त्रालय र मन्त्रीलाई जानकारी गराईसकेको बताए । उसो त सिटी स्क्यान यसअघि पनि बिग्रिएको थियो । बिग्रिएको कन्ट्रोल प्यानल फेरीएपछि करिब चार हप्ता चलेपछि बिग्रिएको थियो । त्यसपछि यो सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । स्क्यान बिग्रिएपछि अन्य उपकरण पनि क्रमशः बिग्रिदै गएका हुन् ।
सरकारी संयन्त्रका कारण स्क्यान मेसिन बनाउन समय लागेको अस्पतालका वरिष्ठ चिकित्सक तथा तत्कालीन निमित्त निर्देशक डा. विनोद शेरचनले भने । ‘स्क्यान मेसिन मात्रै बनाउन लगभग ६० हजार डलर लाग्छ । त्यसको पैसा निकासा गर्न सेन्टरले मन्त्रालयलाई र मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयलाई भन्नुपर्छ, त्यसपछि पनि अर्थले छुट्याउनुपर्छ’, उनले भने,‘लामो प्रोसेस छ, सरकारी काम हो, टेन्डर गर्नुपर्छ यी र यस्ता विभिन्न सरकारी प्रोसेसले गर्दा ढिला भएको छ ।’
निर्देशक डा. यादव ट्रमा सेन्टरमा आएको लगभग दुई महिना भयो । उनले पनि आउनेबित्तिकै रकम माग गरेपनि अहिलेसम्म निकासा नभएको जानकारी दिए । निर्देशक यादवले रकम निकासा भए सिटिस्क्यान मेसिन एक महिनामा बन्ने बताए । सेन्टरले सबै उपकरण बनाउन २२ करोड रकम माग गरेको छ । सो रकम उपलब्ध भए तीन महिनाभित्र सबै उपकरण तयार हुने बताइएको छ । २२ करोडमध्ये १४ करोड पहिलाको दुई वर्षदेखिको सप्लायर्सहरूले गरेको कामको रकम तिर्न बाँकी रहेको निर्देशक यादवले जानकारी दिए ।
गल्ती काम गरेर लोकप्रियता आउँदैन कमरेडहरू
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सिधै बचाउ गर्न हिच्किचाइ रहेका दोस्रो तहका अध्यक्ष…
पीडितको आँशु पुच्छन पुगे कांग्रेसका सांसदहरू
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले भक्तपुरको मनहरा क्षेत्रमा भएको डुबान र क्षतिको अवलोकन गरेका छन् ।
शनिबार डुबान प्रभावित क्षेत्रमा…
कृष्णनगरमा आज पनि कर्फ्यू जारी
कपिलवस् । सीमावर्ती बजार कृष्णनगरमा शुक्रबार पनि कर्फ्यू जारी छ । लक्ष्मी पूजाको मूर्ति बिसर्जनका क्रममा भएको विवादले उग्र…
प्रधानमन्त्रीसँग फोरम सांसदको गोप्य भेट, भीसी हटाउन उपेन्द्रलाई करोडौंको थैली
काठमाडौं । संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष तथा उपप्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादव प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग रुष्ट भएका छन् ।…
भ्रष्टाचारको अखडा बन्दै कम्पनी रजिष्ट्रार, महिनैपिच्छे समातिन थाले कर्मचारी
काठमाडौं । पछिल्लो समय धेरै अनियमितता हुने निकायमा कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय पनि थपिएको छ। भ्रष्टाचारको आरोपमा उक्त कार्यालयबाट महिनैपिच्छे…
कांग्रेसमा फेरी देउवाकै राज,यस्ताे छ दुईतिहाइ मतले जिताउने तयारी !
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसभित्र संसदीय दलको निर्वाचनका लागि दुई गुटबीच घम्साघम्सी पर्ने भएको छ । संस्थापन पक्षले सभापति शेरबहादुर देउवालाई…
‘भारतले सुगौली सन्धि र कुमाउ–गढवालमध्ये एउटा रोजोस्’
भारतविरुद्धको प्रदर्शनमा मागियो प्रधानमन्त्रीको राजीनामा
लता मंगेशकर गम्भीर बिरामी
सभामुख बनाउने भएमात्र राजीनामा दिन्छु : उपसभामुख शिवमाया
राजकुमार निर्दोष भएको परिवारको दावी
तास चिन्ने प्रविधि जडित जुवा सामग्रीसहित एक जना पक्राउ
केसीलाई लिन डडेल्धुरा पुगेको हेलिकप्टर फिर्ता
‘अघोरी बाबा’की पत्नी पाण्डे पक्राउ
‘अघोरी बाबा’की पत्नी पाण्डे पक्राउ 38 views
जव मैले उनलाइ पानी पानी हुने गरी गरे 34 views
भाउजुले केही नवोली मेरो हात विस्तारै तारेर आफ्नो छातीमा पुर्याइन् 21 views
अज्ञात समूहद्वारा बसमा आगजनी 13 views
भारतसँग उच्चस्तरीय वार्ता गरौं, अन्तर्राष्ट्रियकरण नभनौं : प्रचण्ड 11 views
संसदीय समितिको बैठकमा गएनन् प्रधानमन्त्री 10 views